ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့ My Office ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်း !!!! - JAPO Japanese News
လာ 27 Apr 2020, 17:10 ညနေ
Covid-19 ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်တော်တော်များများကို အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အခြေအနေသို့ လတ်တလော ပြောင်းလဲလိုက်သည်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်၊ ဒီလိုလုပ်ရတာကို အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ အလုပ်မှာ အာရုံမစိုက်နိုင်တာတွေ ရှိလာပါတယ်။
နားကြပ်တပ်ကာ တေးဂီတနားထောင်နေရင်းတောင် မျက်လုံးတွေကတော့ အမြင်တွေကို မဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါဘူး။
ထို့အပြင် အာရုံမစိုက်နိုင်လို့ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်ရတာနဲ့ ဘေးက မိသားစုကိုလည်း ဂရုစိုက်ရတာနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေရှိလာပါတယ်။
အခုလို ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီထုတ်ကုန်လေးရှိရင် ဘယ်လိုလဲ?
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အတော်လေး သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပေမယ့် ဒါလေးနဲ့သာဆို အိမ်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သီးသန့် အလုပ်ကို အာရုံစိုက်နိုင်မယ်ထင်တယ်နော်။မျက်နှာချက်ကို ပိတ်လို့လည်းရတယ်။ အပြင်အလင်းရောင်ကို ရချင်ရင် အပေါ်ကအမိုးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
အသံကာကွယ်မှု တော့ မပါလို့ နားကြပ်တပ်ပြီးတော့ အသုံးပြုကြည့် ရအောင်။ထိုင်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုရင်တော့ လုံလောက်တဲ့ အမြင့်ပမာဏရှိပါတယ်။
ဒီဟာအရမ်းပေါ့ပါးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခန်းရဲ့ထောင့်လေးထောင့်စီတိုင်းမှာ ရေဘူးတစ်ပုလင်းစာနေရာ
အိတ်ကပ်လေးတွေ ပူးတွဲပါရှိလို့ အဲဒီအိတ်ဆောင်နေရာလေးမှာ ရေဘူးထည့်လိုက်ရင်ပဲ လုံလောက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကို ရပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။သယ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူပါတယ်
သယ်ဆောင်ပြီးမသွားရတဲ့အခါ၊ အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ အခါမှာလည်း ဖျာလိုပဲ ခေါက်ထားနိုင်လို့ နေရာ မယူတဲ့အတွက် သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။အဖွင့်၊ အပိတ် လည်း လွယ်ကူတယ်။
အလုပ်တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပဲ၊ စာလေ့လာမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ချင်တဲ့အခါ၊ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာ ဒီထုတ်ကုန်ကို အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။
သင်ကော တစ်ခုလောက်ရှိထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ ?
intoneasutra (Jyokoenmanji Temple)
(၂၂) ရက်နေ့၊ သေဆုံးသူ ၁၀၈ ဦးဖြင့် အများဆုံးစံချိန်တင်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၅၀၄၅ ဦးရှိ
ရည်းစားမရနိုင်တော့မယ့်သူတွေအတွက် အဖော်ပြုပေးမယ့် “ လက်” တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတီထွင်